Juanfran oo ku jees jeesay Xavi Hernandez kahor kulanka dhex mari doona kooxaha Barcelona iyo Atletico Madrid – Gool FM
Juanfran oo ku jees jeesay Xavi Hernandez kahor kulanka dhex mari doona kooxaha Barcelona iyo Atletico Madrid
(Atletico) 16 Nof 2018. Difaaca kooxda Atletico Madrid Juanfran ayaa kaga faa’ideestay xaalada haatan ee cowska gudaha garoonka Wanda Metropolitano, si uu ugu jees jeeso halyayga kooxda Barcelona ee Xavi Hernandez.
Hadalka difaaca kooxda Atletico Madrid ee Juanfran ayaa wuxuu imaanayaa kahor kulanka xiisaha badan ee la wada sugayo ay ku wada ciyaari doonaan kooxaha Atletico Madrid iyo Barcelona horyaalka La Liga ee dalka Spain kadib kulamada caalamiga ah.
Xavi Hernandez ayaa looga yaqaanaa gudaha dalka Spain inuu yahay “khabiirka cawska” ka dib markii uu ka cawday in ka badan hal jeer, marka uu ahaa ciyaaryahan ka tirsan kooxda Barcelona, taasoo keentay in Juanfran uu ku jees jeeso.
“Xaaladda iyo cowska garoonka Wanda Metropolitano wuxuu diyaar u yahay kulanka Barcelona, sidaas darteed xitaa Xavi Hernandez wuxuu raali ka noqon doonaa cowska garoonka Wanda”.
Dhinaca kale Juanfran ayaa wuxuu sheegay inuu jeclaan lahaa in Neymar Jr uu markale dib ugu soo laabto horyaalka La Liga ee dalka Spain wuxuuna yiri:
“Waan jeclaan lahaa hadii uu markale Neymar Jr dib ugu soo laaban lahaa horyaalka La Liga ee dalka Spain, sababtoo ah waxaa muhiim ah in horyaalka ay qeyb ka noqdaan xidigaha ugu fiican kubada cagta aduunka”.
Barcelona oo ka hadashay mustaqbalka Ousmane Dembélé, kadib kulankii Arbacada ay la qaateen wakiilkiisa